Texas waxay xireysaa meelaha laga gudbo xuduudaha si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Texas waxay xireysaa meelaha laga gudbo xuduudaha si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Buundada Caalamiga ah ee Del Rio, Texas, in ka badan 8,000 oo muhaajiriin ah ayaa u tallaabay Mareykanka oo hadda sugaya in ay qabtaan Ciidanka Ilaalada Xuduudaha Mareykanka.
Kastamyada iyo Ilaalinta Xuduudaha Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqay in wakiiladeeda ay la kulmeen 208,887 muhaajiriin sharci darro ah bishii Ogosto, koror ka badan 300% tan iyo Ogosto 2020. Bil kasta sannadkan ilaa hadda waxaa la arkay tirooyin rikoor ah oo la kulmay marka la barbar dhigo isla bilaha 2020, 2019 iyo 2018, iyo 1.1 milyan oo qof ayaa si sharci darro ah uga soo tallaabay xadka 2021 illaa hadda.
Guddoomiyaha gobolka Texas ayaa amar ku bixiyay in la xiro dhammaan goobihii laga tallaabi jiray xadka koonfureed si loo joojiyo fatahaadda muhaajiriinta sharci -darrada ah ku soo gala gobolka.
Abbott wuxuu ku dhawaaqay in, si ka duwan Madaxweyne Biden, Gobolka Texas ay wali ka go'an tahay sugidda xuduudaheena iyo ilaalinta dadka Mareykanka.
Guddoomiyaha Gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku dhawaaqay xiritaanka lixda goobood ee gobolka laga gudbo, “si loo joojiyo socdaaladan (muhaajiriinta sharci -darrada ah) inay ka badiyaan gobolkeenna.”
Gudoomiyaha Gobolka Texas Greg Abbott
Abbott, oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi: "Dayacaad darrada weyn ee maamulka Biden si ay shaqadooda u gutaan oo ay u ilaaliyaan xadka waa wax laga naxo."
"Si ka duwan Madaxweyne Biden, Gobolka Texas wuxuu weli ku dadaalayaa sugidda xuduudaheena iyo ilaalinta dadka Mareykanka ah."
"Waxaan ku amray Waaxda Badbaadada Dadweynaha iyo Ilaalada Qaranka Texas in shaqaalaha qalliinka iyo baabuurta ay xiraan lix meelood oo laga soo galo soohdinta koonfureed si loo joojiyo safarradaan inay ka badiyaan gobolkeenna."
Buundada Caalamiga ah ee Del Rio, Texas, in ka badan 8,000 muhaajiriin u soo tallaabay Mareykanka oo hadda sugaya in gacanta lagu soo dhigo Ilaalada Xuduudaha Mareykanka saraakiisha, sida ay sheegayaan wararka khamiista.
Dadkii badnaa ayaa labanlaabmay cabirkooda 4,000 ilaa 8,000 tan iyo Arbacadii, iyadoo ilo sharci fulin ay sheegeen in qaar badan ay ahaayeen Haiti.
Baaxadda dadka, ayaa lagu soo waramayaa inay buux dhaafiyeen Ilaalada Xuduuda, taas oo, sida uu sheegay Abbott, ka codsaday Gobolka Texas inuu soo galo oo xiro meelaha laga gudbo.
Del Rio waa mid ka mid ah saddexda daraasiin ee meelaha isgoyska ah ee xadka Texas-Mexico.
Muhaajiriinta imanaya isgoysyadan waxay codsan karaan magangalyo ama waxay isu dhiibi karaan Ilaalada Xuduudaha si loo xiro kadibna loo sii daayo Mareykanka, iyadoo siyaasaddan 'qabashada iyo sii deynta' ee Obama uu dib u soo celiyay Madaxweyne Joe Biden horaantii sanadkan.
Intaa waxaa dheer, maamulka Biden wuu hakiyay Trump'' Ku sii jir siyaasadda Mexico, taas oo looga baahan yahay dhammaan muhaajiriinta soo gelaya inay magangelyo ama sheegasho gelitaan ka sameeyaan Meksiko oo ay halkaas ku sugaan ilaa laga baaraandegayo sheegashooyinkaas.
Biden ayaa sidoo kale wax ka beddelay TrumpSiyaasadda dib-u-noqoshada dhammaan xad-gudubyada xuduudaha intii lagu jiray masiibada COVID-19, iyada oo la sawiray ka-reebitaan ka yar 18-jirrada, taasoo horseedday in ay kor u kacaan carruurta aan cidina wehlin ee ka safraya Bartamaha Ameerika una socda Mareykanka.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego xogta Kastamyada iyo Ilaalinta Xuduudaha, inta badan xad -gudbayaasha xadka ee 2021 waa qaangaar.
Kastamka Mareykanka iyo Ilaalinta Xuduudaha Shalay ku dhawaaqay in wakiiladeeda ay la kulmeen 208,887 muhaajiriin sharci -darro ah bishii Ogost, koror ka badan 300% tan iyo Ogosto 2020. Bil kasta sannadkan ilaa hadda waxaa la arkay tirooyin rikoor ah marka la barbar dhigo isla bilihii 2020, 2019 iyo 2018, iyo 1.1 milyan dadku waxay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka 2021 illaa hadda.
Waxyar ka dib ku dhawaaqistiisa, Guddoomiye Abbott ayaa sii daayay bayaan kale oo sheegaya in maamulka Biden uu amray in isgoysyada Texas ay furan yihiin.
Abbott wuxuu sheegay in shaqaalaha Waaxda Badbaadada Dadweynaha iyo shaqaalaha Ilaalada Qaranka ay si kastaba ha ahaatee sii joogi doonaan goobta si ay uga hortagaan isgoysyada.